Umgangatho wethu - Qiangzhong oomatshini Technology Co., Ltd.
Izikhongozeli ezicocekileyo – indibaniselwano efanelekileyo yexabiso kunye nokusebenza
Ukuveliswa kweemveliso zamayeza ezixabisekileyo kunye ne-aseptic kunye nokutya okukhuselekileyo kunye nesiselo kufuna izikhongozeli ezicocekileyo ezikumgangatho ophezulu. Isitshixo sokuvelisa izikhongozeli ezikumgangatho ophezulu kukuvelisa okungaphezulu, izixhobo ezikumgangatho ophezulu, ukusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu, ulawulo lomgangatho oluchanekileyo kunye noyilo olukhuthazayo: ukusebenza kwe-aseptic, uyilo lokuphela kwabafileyo, izinto ezihlanganisiweyo zeCIP / SIP Umgangatho ophezulu, ucocekile kwaye kulula ukusebenza kwinkqubo yokujonga.
Isikhongozeli esicocekileyo sinokuba yiyunithi yokuma yodwa okanye iyunithi yenkqubo ezenzekelayo, efakwe njengemodyuli esebenzayo kwindawo yomthengi, kubandakanya: ukuphazamiseka, i-homogenization, ukusasazeka, umlinganiso, kunye neyunithi yolawulo, ivalve kunye nokudibanisa imibhobho. Oomatshini beQiangzhong banokubonelela ngazo zonke iintlobo zezikhongozeli ezicocekileyo ezihlangabezana neemfuno zamayeza e-bio-amayeza, ukutya kunye nesiselo, kunye neenkqubo ezintle zemichiza. Sineziqinisekiso zokuvelisa uxinzelelo lwe-D1 / D2, uyilo lobuchule kunye neqela lokuvelisa kunye nenkqubo yokuvelisa evuthiweyo, enokunceda abathengi bakhethe izixhobo ezifanelekileyo, baqinisekise ngokupheleleyo ukhuseleko kunye nokuthembeka kweemveliso zakho, kunye nokuqinisekisa ukusetyenziswa ngokufanelekileyo.
Welding and Weld Treatment – ​​Inkqubo yokuGqwesa
Umgangatho wetanki umiselwa kukuwelda kunye neendlela zokulungisa ze-weld ezisetyenziswa kwinkqubo yokuvelisa. Amandla eWeld kunye nomgangatho wonyango lwasemva konyango kuqinisekisa ubomi betanki kunye nokusebenza ngokukuko.
Oomatshini beQiangzhong basebenzisa insimbi ekumgangatho ophezulu ukwenza itanki. Ezi zinto zenziwe ngesinyithi zineemfuno ezingqongqo kakhulu zewelding kunye neendlela zokwenza i-weld zokuqinisekisa ukuba itanki ayihambelani kwaye inobomi benkonzo ende kunye nozinzo. Qiangzhong Oomatshini baye amava welders kunye nomgangatho iwelding uzinzile kakhulu kunye repeatability eliphezulu. Inkqubo ye-welding ijongwa kuyo yonke le nkqubo kusetyenziswa itekhnoloji ye-welding ethe kratya.
Itekhnoloji ye-welding ngokuzenzekelayo ibeka iliso kwinkqubo yokuwelda kuyo yonke indawo.
Uqinisekiso lomgangatho weWelding
iwelding ezenzekelayo, iwelding ye-MIG / TIG
Ubushushu begumbi lokuzenzekelayo kunye nolawulo lokufuma, ulawulo lothuli
izinto isampulu, ubukhulu kunye welding ulawulo lwangoku
ukucoceka okuphezulu kukhuselo lwegesi yokukhusela igesi
Ulawulo lomgangatho kunye nokuvavanywa
Inkqubo zonke iitanki Uvavanyo lomgangatho olungqongqo kufuneka lwenziwe. Olu hlolo liyi
Inxalenye ebalulekileyo yenkqubo yeFAT kunye namaxwebhu afanelekileyo aya kufakwa kwifayile yeFAT kwaye ekugqibeleni ingeniswe kumthengi. Izinto zovavanyo lwe-FAT ezinokucelwa ngumthengi zibandakanya:
• Ukuhlolwa kwezinto
• Umphezulu woburhabaxa Uhlolo kunye nemilinganiselo
• Ubushushu, uvavanyo lokupholisa
Uvavanyo lombane olufana: novavanyo lokungcangcazela, uvavanyo lokungcangcazela, uvavanyo lwengxolo, njl.